Ma jiri doono Android 10 loogu talagalay Samsung's Galaxy S8 iyo Galaxy Note 8 taxane | Androidsis
Warka xun ee isticmaalayaasha Galaxy S8 iyo Galaxy Note 8! Ma heli doonaan cusbooneysiinta software-ka ee lagu daray nidaamka hawlgalka Android 10.
Tan iyo ka hor intaan la soo saarin Android 10, inbadan ayaa isweydiinayey in taleefannadan ay heli doonaan cusbooneysiinta. Xitaa muuqatay warbixinno kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay suurtagalnimada hoose ee tan, laakiin maahan ilaa dhowr saacadood ka hor in si rasmi ah loo xaqiijiyay in aysan u qalmi doonin xirmada qalabka cusub ee lagu daro isku-xirnaanta, sidaas darteed waxaa loogu talagalay inay ku sii socdaan nooca Pie ilaa maalmaha ugu dambeeya.
Waxaa lagu dhawaaqay Maarso 2017, Galaxy S8 iyo Galaxy S8 ayaa horay loo sii raray iyadoo ay wataan Android 7 Nougat. Galaxy Note 8, oo si rasmi ah loo sameeyay bishii Ogosto ee isla sanadkaas, ayaa sidoo kale la yimid Nougat oo horay loo sii rakibay. Telefoonadan ayaa xaq u yeeshay laba cusbooneysiin oo nidaamka casriyeynta ah. Shirkadda Koonfurta Kuuriya waxay horey u sii deysay cusbooneysiinta Android Oreo iyo Pie. Sidaa darteed, Qalabkani ma heli doono cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Android 10. (Baro: Qiyaastii taariikhda la bilaabayo ee Android 10 ee saldhigyada Samsung)
Tan waxaa lagu xaqiijiyay jadwalka cusbooneysiinta cusub ee Android 10 ee ay shirkaddu u daabacday Israel, Shiinaha, Hindiya iyo Filibiin, iyo dalal kale, oo aan midkoodna tafaasiil lagu faahfaahin. Marka Haddii aad tahay isticmaale mid ka mid ah moodooyinkaas, waad ka takhalusi kartaa fikradda ah helitaanka Android 10.
Khariidadda Samsung ee loogu talagalay cusbooneysiinta Android 10 ee taleefannada casriga ah iyo kiniinnada waxaa ku jira in ka badan 40 aalado Galaxy ah. Daahfurka nidaamka qalliinka wuxuu bilaaban doonaa sanadka soo socda. Android 10 ayaa loo heli doonaa taleefannada calanka, sida la filayo, iyo sidoo kale qaar ka mid ah taleefannada dhexdhexaadka ah rubuca hore ee sanadka soo socda. Lama oga haddii qaar ka mid ah boosteejooyinka hoose-hoose ee aan muddo dheer suuqa ku jirin ay heli doonaan qalabka loo yaqaan 'firmware', laakiin waa la filayaa taas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Ma jiri doono Android 10 oo loogu talagalay taxanaha Samsung ee Galaxy S8 iyo Galaxy Note 8